Epub မှာ မြန်မာလိုဖတ်လို့ရနိုင်မလား? - MYSTERY ZILLION
Epub မှာ မြန်မာလိုဖတ်လို့ရနိုင်မလား?
http://www.feedbooks.com/ လိုမျိုး နေရာမှာ မြန်မာစာ Epub တင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါရမရသိချင်ပါတယ်။ Mobile OS တွေမှာ PDF နဲ့ ကျတော့ မြန်မာလို ဖတ်ရပြုရ လေးပင်ပြီး လွယ်ကူမှုမရှိသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
you can do with https://github.com/saturngod/MMepub , but you need python to convert epub with zawgyi embed ..
ဒီထက်လွယ်တဲ့နည်းလမ်းလေးများမရှိတော့ဘူးလားဗျာ။ Window OS ပေါ်မှာရောဘယ်လို run ရမှာလဲ။ ကွန်ပျူတာမှာလဲ လိုအပ်ချက်တွေများတော့ သိပ်မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
@zawgyilay , You can create with Indesign CS 5. It also support font embed in Indesign export epub file.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Mr Saturngod.